क्याप्टेन विजय लामाको बाबुराम र सरिता गिरीलाई प्रश्न, के नेपालीले सधै भारतसँग डराएर मात्र बस्नुपर्ने ? गुलामी मात्र गर्नुपर्ने ? – Entertainment Khabar
क्याप्टेन विजय लामाको बाबुराम र सरिता गिरीलाई प्रश्न, के नेपालीले सधै भारतसँग डराएर मात्र बस्नुपर्ने ? गुलामी मात्र गर्नुपर्ने ?
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन विजय लामा सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय व्यतित गर्ने सरकारी कर्मचारीमा पर्छन् । आफूलाई मनमा लागेको विषय निर्धक्क र नडराइकन उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै आएका छन् । आफ्नो स्टाटसकै कारण उनी कारबाहीमा परेका छन् ।